COVID-19 မှ ပေးသောတရား – BurmeseHearts
သေစကားပြောရင် မပြောကောင်းပြောကောင်းဆိုပြီး စကားပိတ်တတ်ကြတဲ့သူတွေ လူဆိုတာ မွေးလာပြီးတဲ့နောက် တနေ့သေရမယ်ဆိုတာ မေ့ထားကြတယ်။ အဲဒီတနေ့ဟာ ကိုယ့်ဆီရောက်ဖို့ အဝေးကြီးလိုသေးတယ်ဆိုပြီး ကျင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ အခက်အခဲတွေကို ရုန်းကန်ရင်း ၊ လောဘ ၊ မောဟ ၊ ဒေါသတွေနဲ့ အသားကျရင်း အဲဒီသေခြင်းတရားကို ဇွတ်မေ့ထားကြတာ။
ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ တရားကောင်းတွေနာလိုက်တဲ့အခါ အခိုက်အတန့်လေး တရားရသလိုလိုနဲ့ လမ်း (သို့မဟုတ်) အိမ်ရောက်တာနဲ့ မှတ်သားနာယူထားသမျှ ဖျော့တော့ မေ့ပျောက်နေရင်း ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ်လိုချင်တာတွေရဖို့ ကြိုးစားရင်း အချိန်တွေကုန်ကြတယ်။
COVID-19 ရုတ်တရက် ပေါ်လာတော့ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ မအိုခင် နာကြ ၊ သေကြရတယ်နော်။ ငယ်သေးပေမယ့်လည်း ရောဂါဖြစ်တတ်တာပဲ။ လူငယ်လည်းဖြစ် ၊ လူလတ်လည်းဖြစ် ၊ လူကြီးလည်းဖြစ် ၊ အယုတ် ၊ အလတ် ၊ အမြတ်မရွေး ဖြစ်ကြတယ်နော်။ ဆင်းရဲသူဖြစ်ဖြစ် ၊ ချမ်းသာသူဖြစ်ဖြစ် ရောဂါမဖြစ်အောင် ငွေနဲ့လာဘ်ထိုးလို့မရဘူး။ အာဏာနဲ့ တားမြစ်လို့မရဘူး။ သတိတရားကပဲ ကူကယ်ရာရှိတယ်။ ဘာထိထိ ၊ ဘာကိုင်ကိုင် သတိထား လက်ဆေးဖို့ ၊ ဘယ်သွားသွား သတိထား နှာခေါင်းစည်းလေးတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားဖို့ သြော် အခုမှ သတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိဘူးလို့ ပိုသိလာကြတယ်။ ဒါဟာ အမြတ်ပဲ။
ရုံးတွေ ၊ ကျောင်းတွေပိတ် ၊ ပြည်ပ ခရီးသွားလာခွင့်တွေပိတ် ၊ ပြည်တွင်းခရီးသွားလာခွင့်တွေ ကန့်သတ် ၊ ညမထွက်ရအမိန့်တွေ ၊ ဟိုသွားဒီလာ ကန့်သတ်အမိန့်တွေနဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကိုတောင် မိသားစု မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ မပျော်ရဲတော့တဲ့အဖြစ် ။ ချောင်းလေးဟန့် ၊ နှာလေးချေ ၊ နေမကောင်းချင်သလို ဖြစ်တာနဲ့ မိမိအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်က သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်ကြမယ်။ ဒီ့ထက်ဆိုးလာရင် အပယ်ခံရတော့တယ်။
သံသယလူနာဖြစ်လာရင် မိမိချစ်တဲ့သူတွေကို ခွဲခွါပြီး နေထိုင်ကြရတယ်။ စိတ်ဓါတ်တွေကျကြတယ်။ မျက်ရည်တွေကျကြတယ်။ အပြန်လမ်းရှိပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ်နဲ့ ဝမ်းနည်းစိတ်တွေကို ပိုက်ပြီး စောင့်ကြည့်ကာလဆိုတာကြီးကို ကျော်ဖြတ်ကြရတယ်။ ဒါဟာ ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ခဏတာ ခွဲခွါရခြင်း ၊ မခွဲချင်ဘဲ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိ ခွဲခွါရတော့တယ်။ ဘာသာမရွေး ၊ လူမျိုးမရွေး ဒီကပ်ကြီးကို ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ ဘယ်အချိန်ပြီးဆုံးမယ်မသိတဲ့ ဒီကပ်ကြီးထဲ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ၊ ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေနဲ့ တနေ့တနေ့ ကျော်ဖြတ်ကြရတယ်။
ကျွန်မကတော့ ဒီလိုအချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေလို့ သုံးနှုန်းရင် ကျွန်မကို ဂေါက်သွားပြီလား ထင်ကြမယ်။ အပြင်ထွက်ခွင့်မရတော့ မိသားစုရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်မိသားစုကို ပိုအချိန်ပေးလို့ရတယ်။ အိမ်ကအလုပ်ဆင်းရသူတွေက နေအိမ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်ရတာမို့ အလုပ်သွားချိန် ၊ အလုပ်ပြန်ချိန်တွေ အပိုထွက်လာတယ်။ ဒီအချိန်လေးတွေမှာ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ စကားစမြည်ပြောတာ ၊ ပျော်ရွှင်စွာစနောက်ရင်း နေထိုင်ခွင့်တွေရှိလာတယ်။ အိမ်ရှင်မတွေဆို ဒီလိုပိုထွက်လာတဲ့ အချိန်တွေမှာ မိသားစုအတွက် စားကောင်းဖွယ်ရာတွေ ချက်ပြုတ်ကျွေးဖို့အချိန်ဆိုတာရယ် ၊ သားသမီးကို ပုံပြင်ပြောပြရင်း သူတို့ပြောချင်တာတွေ နားထောင်ပေးဖို့ အချိန်ထွက်လာတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘ အိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင် အပြင်လည်ပတ်ခွင့်တွေ ပိတ်ထားတော့ ဒီအချိန်တွေမှာ အိမ်က မိအိုဖအိုကို ပိုအချိန်ပေးလို့ရတယ်။ ဇနီးအိမ်မှာ ဘာတွေလုပ်ရင်း အချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာ အိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ခင်ပွန်းက မျက်မြင်တွေ့ရှိပြီး ဇနီးအိမ်ကိစ္စ ၊ သားသမီးတာဝန်တွေနဲ့ အနားမရတာ ပိုနားလည်လာမယ်။ ခင်ပွန်းရဲ့အလုပ်တာဝန် ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ရတယ်ဆိုတာလည်း ဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေ မျက်မြင်တွေ့ခွင့်ရှိမယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် နားလည်မှုတွေ ၊ ဖေးမမှုတွေ ၊ ချစ်ခင်မှုတွေ တိုးလာဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းလို့ ကျွန်မမြင်တယ်။
ဒီကပ်ရောဂါကြီးမတိုင်ခင်က အပြင်မှာပဲ အလုပ်ရှုပ်နေကြတော့ အနီးကပ်ရှိနေသူတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်သိပ်မရှိဘူး။ ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာ ဂရုစိုက်နိုင်မယ့် စိတ်ခွန်အားတွေက အလုပ်ကစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ပျောက်နေတာများတယ်။ ခုတော့ ကိုယ့်အနားရှိနေတဲ့သူတွေကို ပိုသတိထားမိလာတဲ့အချိန်မျိုးမို့ ကိုယ့်အနားရှိနေသူတွေဟာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် တကယ်အရေးပါတဲ့သူတွေလို့ သဘောပေါက်ပြီး သူတို့ကို ပိုလို့ အချိန်ပေးဖြစ်တာ ၊ မေတ္တာပေးဖြစ်တာ ၊ နားလည်ဖေးမမှု ၊ နွေးထွေးမှုတွေပေးဖြစ်တာ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလိုက်တဲ့အချိန်တွေလဲ။ ရောဂါမဖြစ်သေးခင် ဒီလိုအချိန်လေးပဲ ဒီလိုအခွင့်အရေး လက်ဝယ်ရရှိထားတာ။ သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်ပြီဆိုရင် ရက်ပိုင်း ၊ လပိုင်းလောက် အနည်းလေးခွဲရတော့မှာလေ။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေ ဖတ်ဖို့အချိန်ထွက်လာတယ်။ ကိုယ်လေ့လာချင်တာတွေကို အွန်လိုင်းကနေတဆင့် လေ့လာခွင့်ရတဲ့ အချိန်တွေလည်း ပိုထွက်လာမယ်။ ကျန်းမာရေးဆိုတာ လူ့ဘဝမှာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဒီကပ်ရောဂါက မီးမောင်းထိုးပြနေတာမို့ လူ့ဘဝဟာ ကျန်းမာအသက်ရှင်နေတုန်းသာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရထားတယ်ဆိုတာ ပိုသိလာတယ်။
ဒီလိုကာလမှာ အရာရာကို မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ လူတွေအပေါ် အပြစ်တင်နေမယ့်အစား လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ နည်းနိုင်သမျှ နည်းနည်းနဲ့ ကိုယ့်အနားရှိတဲ့သူတွေကို ရတဲ့အချိန်နဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကောင်းကောင်း အသုံးချလို့ ဘဝမှာ အချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချသွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကြုံကြုံ နောင်တကင်းကင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်သွားနိုင်မှာပါ။ အားလုံးကျန်းမာလို့ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဒီရောဂါကပ်ဆိုးကြီးကို ကျော်လွှားနိုင်ကြဖို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း …..
ကလေးများအား ဆုံးမသွန်သင်ခြင်း အပိုင်း(၁)
လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်ချက်များနှင့် သတိထားဖွယ်အချက်များ
ကလေးသူငယ်တွေကို အကောင်းမြင်စိတ်ရှိအောင် ဘာကြောင့်သင်ကြားပေးသင့်သလဲ?
ရှေးရိုးစွဲယုံကြည်မှုတိုင်းဟာ အမှန်တရားတော့ မဟုတ်ပါ
မိခင်လောင်းများ၏ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် ကျန်းမာရေး
အစာသစ်မိတ်ဆက်တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦး၏ တနေ့တာ
ကိုယ့်အိုးနှင့်ကိုယ့်ဆန် တန်အောင် စဉ်းစားပါလေ
ဆီးစစ်ကိရိယာမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိ ၊ မရှိ ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ?
(၁)နှစ်ကနေ (၃)နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာ ဘာကြောင့် နည်းမှန်လမ်းမှန်…
ကလေးငယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ခင်ပွန်းများက တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးသည့် ဇနီးကောင်းများ